Na ọ dịghị ịkwụsị uru bu niile mara na na sundry na Apple yiri ka na-eso ya na isi. Mgbe ukara unveiling nke iOS 9, bụ nke na-ejigide bukwanu myirịta ọ bụ dịtụ 'nsogbu' ụzọ, a 9 mbipụta inwe a owot pụrụ iche atụmatụ bụ ọ bụla n'ụbọchị mma. iOS 8 N'ezie nwere ọ bụla otu akporo mmelite mma ma ihe ịma aka ugbu a dabeere n'elu ụlọ ọrụ na-ahụ ma ọ bụrụ na ha na e ofu ma ọ bụ ahụhụ na-n'ihu kwukwara.
Iji nweta a zuru ezu nzọụkwụ site nzọụkwụ ihe ọmụma banyere ihe iOS 9 esetịpụ n'ihi unu, na-agụ.
Gịnị ka ọhụrụ iOS 9 na-eweta?
Ka anyị na-ji ya nsọpụrụ, na iOS 9 ga na-ebi ruo ihe ọ na-ekwe nkwa iji napụta. Ebe a na-ewere a lee anya na ole na ole a ma ama na standout nwere.
Nke a bụ nnoo Google version si Apple, na-arụ ọrụ dị ka otu nnyemaaka na-ahụ maka aggregating data ofụri Ndi ana-akpo, Kalinda, Siri,-atọ ndị ọzọ ngwa ọdịnala na na.
Top-notch ịrụ ọrụ batrị
A mkpa nke ukwuu enyemaka si Apple emesịala e emejuputa ebe a. The iOS 8 enweghị kwesịrị ekwesị batrị ịzọpụta mode. Ya mere, ị maara na ịgbanyụ data ma ọ bụ Bluetooth ma ọ bụ ọbụna Wi-Fi zuru kpamkpam na gị. Na 9 version, ndokwa nke atọ awa ọzọ ojiji bụ a welcome mgbanwe.
E ihe ngwa ngwa chọrọ iji kwalite Siri, karịsịa mgbe inweta kasị nke proactive. Ọhụrụ ntọhapụ awade wider nkwado maka niile eke asụsụ iwu ofụri ekwentị, ekele ọhụrụ interface ngosi. Ọ ga-abụ oké na-ahụ otu ugboro reactive ọrụ na-agbanwe agbanwe ka mma.
Kwalite Chakwasa ihie
A ọhụrụ Chakwasa ihie bụ a site-ngwaahịa nke 'ibu Siri' na 'proactive nnyemaaka'. Dị nnọọ ekpochapụ na ekpe nke n'ụlọ ihuenyo na ị ga-data nwere njikọ ole na ole na-atụ aro ngwa, kalenda ihe, geo-ndụ ozi mpaghara na dị ka.
Enwekwukwa Apple Maps
Ụlọ ọrụ ugbu prides inwe Apple Maps na-nnọọ mma na ọtụtụ ebe na-eji maka nkewa ngwa na iOS (3.5 ugboro elu karịa 'ọzọ na-eduga nkewa ngwa'). Nke a na iOS 9 kweere na-esi ole na ole ọzọ n'ụzọ na-aga ntụziaka, nke ga-naani mmanu ya aha.
iOS 9 vs. iOS 8: A tụnyere
Batrị ojiji akp
Batrị zuru ukwuu n'ime on data, Bluetooth, wdg
'A mma ahụmahụ ọ bụla aka'
Touch ahụmahụ na-anọgide n'otu na-enweghị ihe akpan akpan na ịnya isi nke
Stock wijetị show batrị ọnọdụ nke iPhones na-ejikọ Apple Watch tinyere 'ịhụ enyi m'
Ọ dịghị otú ahụ mma bụ ugbu ke ngosi center nke iOS 8
Multitasking, a n'ezie na-ekpo ọkụ mmasị na 9 version
Ọ dịghị ekwe omume nke multitasking
New search ubi na n'elu mgbe ntọala
Ọ dịghị search nhọrọ
Home ihuenyo nwere ọhụrụ obere akpa ngwa na-anọchi passbook
Obere akpa ngwa anọghị
Reader mode na safari enyere họrọ ndabere na agba na typography
Reader mode nwere otu na-acha ọcha ndabere
New 'òkè' nhọrọ maka njikọ
Ọ dịghị 'òkè' nhọrọ. Naanị 'bee', 'oyiri', 'kọwaa'
Keyboard nwere elu / obere mkpụrụedemede igodo
Ọ dịghị otú ahụ nhọrọ
Ndetu ngwa nwere nhọrọ ịgbakwunye osise, foto, mgbanwe ederede formatting, anatara na ọtụtụ ndị ọzọ
Limited version nke nhọrọ
Nke ngwaọrụ nwere ike kwalite ka iOS 9?
Na nke kacha mma nke ọhụrụ atụmatụ na ngwa, iOS ọrụ nwere ike nbuli a rie ude nke enyemaka. Otú ọ dị, otu oké egwu akụkụ yiri ka opitoropi ọtụtụ n'ime ha ala bụ ngwaọrụ upgradeability. Ma ozi ọma bụ na iPhones na-meworo ochie dị iPhone 4S na ọbụna iPads dị ka iPad 2 ga-enwe ike na-agba ọsọ iOS 9 were were. Ọ bụ tremendously anabata na ọsọ karịa iOS 8, otú onye pụrụ ịtụ anya bụghị ọtụtụ nke nchekwa ga na-arụ na a hassle-free usoro maka okenye devoices. Iji banyere ole na ole ọzọ, iPhone 5, 5C, 5s, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus na n'etiti iPads, Ikuku, Air 2, 2, 3rd ọgbọ, Obere 3, Obere 2 na Obere nakwa iPod emetụ 5th ọgbọ nwere ike nweta nkwalite ka iOS 9 mfe. Apple n'ezie bụ echeta otú ahụ!
Ị ga-kwalite ka iOS 9?
I kwesịrị kwalite ka iOS 9 ma ọ bụ bụ kpam kpam a mkpebi onwe onye. Otú ọ dị, ọtụtụ ntuli aka e duziri na eziokwu gwara, ọtụtụ n'ime ha kwuputela ịnụ ọkụ n'obi na banyere ebumnobi ha na-aga n'ihu n'ihu na ya. Mgbe niile, ọ dịghị ihe mmerụ eme na! Onye na-adịghị amasị ụtọ uru site ọhụrụ version, karịsịa mgbe ị nwere nhọrọ nke upgrading fọrọ nke nta niile isi iPhones, iPads na dị ka.
> Resource> iOS> Apple si iOS 9 vs iOS 8